Gastón Cornejo Bascopé - World March
ပင်မစာမျက်နှာ » NOTICIAS » စာနယ်ဇင်းမှတ်စု » Gastón Cornejo Bascopéကိုဂုဏ်ပြုပါ
08 / 10 / 2020 07 / 10 / 2020 အားဖြင့် အန်တိုနီယို Gancedo
ငါတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတောက်ပသောGastón Cornejo Bascopéကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဒေါက်တာGastón Rolando Cornejo Bascopéသည်အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နံနက်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
သူသည် ၁၉၃၃ တွင် Cochabamba တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည်ကလေးဘဝကို Sacaba တွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် Colegio La Salle ရှိအထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ခဲ့သည်။
ဆရာဝန်အဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်အတွေ့အကြုံသည် Caja Petrolera ရှိ Yacuiba တွင်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်Patiño Scholarship နှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာတက္ကသိုလ်တွင်အထူးပြုခဲ့သည်။
Gastón Cornejo သည်ဆရာဝန်၊ ကဗျာဆရာ၊ သမိုင်းပညာရှင်၊ လက်ဝဲစစ်သွေးကြွနှင့် MAS (ဆိုရှယ်လစ်လှုပ်ရှားမှု) ၏အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သည်။ သူသည်ဘိုလီးဗီးယားတွင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ဟုခေါ်သည့်လမ်းကြောင်းကိုတိတ်ဆိတ်စွာဝေဖန်ခဲ့သည်။
အလွန်ချစ်ခင်တွယ်တာသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးဖွယ်ကောင်းသောလူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးမကောင်းသောအကြံအစည်များနှင့်နီးကပ်စွာကြည့်ရှုခြင်း၊ တက်ကြွသောဥာဏ်ရည်ရှိသူ၊ သူ၏ဇာတိဘိုလီးဗီးယားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အသိပညာဗဟုသုတ၊
သူသည် Evo Morales ၏ပထမဆုံးအစိုးရတက်ကြွစွာအသင်း ၀ င်ဖြစ်ပြီးသူ၏ထူးခြားထင်ရှားသောလုပ်ရပ်များသည်လက်ရှိဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာစာသားရေးဆွဲခြင်းတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း (သို့) ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာသို့သဘောတူညီမှုရရှိရန်အောင်မြင်သောချီလီအစိုးရနှင့်မအောင်မြင်သောစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ။
ဒေါက်တာGastón Cornejo Bascopéကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းသည်သူလုပ်ဆောင်ခဲ့သောမျက်နှာစာများ၏မတူကွဲပြားမှုကြောင့်ရှုပ်ထွေးသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဤတောက်ပသောသတ္တဝါများနှင့်မျှဝေသည်။
Bertolt Brecht က“တစ်နေ့တိုက်ခိုက်ပြီးကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်၊ တစ်နှစ်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေပိုကောင်းတယ်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ပွဲ ၀ င်ပြီးအလွန်ကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့တစ်သက်တာတိုက်ပွဲဝင်သူတွေကတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တယ်။"
သူအသက်ရှင်နေစဉ်တွင်သူသည်အစာအိမ်နာရောဂါကုသသူအဖြစ်တာရှည်ခံသည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ဆုများစွာကိုရရှိခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင်အမျိုးသားကျန်းမာရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှစာရေးဆရာနှင့်သမိုင်းပညာရှင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြူနီစီပယ်ကောင်စီမှချီးမြှင့်သည့်အက်စ်တီဘန်း Arce ဂုဏ်ထူးအားလည်းကောင်းဆုများစွာရရှိခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်စက်တင်ဘာ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဟာကြီးမားတဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုသူ့ရဲ့အတိမ်အနက်နဲ့အနံမှာပဲဆက်နေနိုင်ပေမယ့်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းဖက်မှုမရှိကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝင်စားမှုသည်သူတို့၏နေ့စဉ်အလုပ်၊ သူတို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်ဖြစ်သည်။
သူကနေရာတိုင်းနှင့်လူမှုရေးနောက်ခံကနေမိတ်ဆွေများကိုရှိ၏ သူ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာ နွေးထွေးပြီးလူသားဆန်ပြီးကြင်နာတတ်သူ၊
ဆောင်းပါးထဲမှာသူကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးမှတ်မိချင်ပါတယ် "ကျီတစ်ခု"သူသေဆုံးပြီးနောက်ဆီလိုကိုမှတ်မိစေရန် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Pressenza ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ "
"တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်သည်လူသားဝါဒဆိုရှယ်လစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဒီမှာရှင်းပြချက်ပါ။ ဦး နှောက်နှင့်နှလုံးသားငါဆိုရှယ်လစ်ဝါဒသို့ကူးပြောင်းခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သော်လည်းလူသားဝါဒကအမြဲကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်။ လက်ဝဲနိုင်ငံသားတစ် ဦး သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ကိုအကြမ်းဖက်မှုနှင့်တရားမမျှတမှုဖန်တီးသူ၊ ဝိညာဏကိုမုန်းတီးသူ၊ Mario Rodríguez Cobos ကကြေငြာခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေကိုအခုတော့ကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်။
လူတိုင်း၎င်း၏သတင်းစကားကိုလေ့လာပြီးငြိမ်းချမ်းရေး၊ အစွမ်းသတ္တိနှင့်ရွှင်လန်းမှုနှင့်ပြည့်ဝရန်၎င်းကိုလေ့ကျင့်ပါစေ။ ၎င်းသည် Jallalla၊ လှပသောနှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း၊ ၀ ိညာဉ်၊ လူသားများနှင့်တွေ့ဆုံသော ajayu ဖြစ်သည်။"
Dr. Cornejo ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်၏နှလုံးသား၊ သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာနှင့်သင်နှင့်အနီးဆုံးရှိသူများသာမကမျိုးဆက်သစ်များနှင့်သင်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့သဘောထား၊ ရိုးသားမှုနှင့်သင်၏ဘ ၀ ကိုလူသား၏ ၀ န်ဆောင်မှုအပေါ် ဦး တည်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏လူသားဖြစ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဤခရီးစဉ် မှနေ၍ သင်၏ခရီးစဉ်အသစ်သည်တောက်ပ။ အဆုံးမဲ့ဖြစ်ရန်အားလုံးအဆင်ပြေစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒကိုဖော်ပြသည်။
သင်၏အရင်းနှီးဆုံးမိသားစု Mariel Claudio Cornejo၊ Maria Lou၊ Gaston Cornejo Ferrufino တို့သည်အလွန်ချစ်ခင်တွယ်တာစွာပွေ့ဖက်တတ်သည်။
ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ကြသောသူများသည်ဤကြီးမြတ်သောလူကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့်သူ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ထုတ်ဝေသောငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ရေးအတွက်ပထမကမ္ဘာချီချီတက်ပွဲကိုသူလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည့်စကားများကိုမှတ်မိလိုကြသည်။ ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ1ª:
ဘိုလီးဗီးယား၏အထက်လွှတ်တော်အမတ်Gastón Cornejo Bascopéမှငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ရေးအတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လကိုလိုက်နာရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းစကား
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားများအကြားပိုမိုကြီးမားသောညီအစ်ကိုအသင်းအပင်းကိုရရှိနိုင်ခြင်းရှိ / မရှိကိုအစဉ်စဉ်းစားနေသည်။ အကယ်၍ ဘာသာတရားများ၊ အယူဝါဒများ၊ စတိတ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားကမ္ဘာကြီးကိုရရှိရန်ဘုံ၊ သာလွန်မြင့်မားသော၊
အကျပ်အတည်း - ဤ ၂၁ ရာစုအစတွင်လူ ဦး ရေတိုးပွားလာခြင်း၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု၊ လူမှုရေးရောဂါများ၊ လူ့ရွှေ့ပြောင်းမှုနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်မှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြုံတွေ့ရသည့်အခါအစိုးရများအနေဖြင့် ပိုမို၍ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်တောင်းဆိုမှုများမှာရှင်းနေပါသည်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများ၊ အင်ပါယာ၏စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းများ၊ ယနေ့ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံ၌ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ပုံတင်ထားသောအာဏာသိမ်းမှုပြန်လည်စတင်ခြင်းချီလီ၊ ဘိုလီးဗီးယားနှင့်အကြမ်းဖက်နိုင်ငံများကမကောင်းဆိုးဝါးများ၏awsကရာဇ်သဲကန္တာရများကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ အကျပ်အတည်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးရွှေ့ဆိုင်း။
သိပ္ပံပညာ၊ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဂေဟဗေဒ၊ ယုံကြည်ကိုးစားထိုက်သောဘာသာရေးအကျပ်အတည်း၊ တစ်ယူသန်ဆန်ခြင်း၊ ခေတ်မမှီသောတည်ဆောက်ပုံများကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကိုခုခံခြင်း၊ ဘဏ္economicာရေးစီးပွားရေးအကျပ်အတည်း, ဂေဟဗေဒအကျပ်အတည်း, ဒီမိုကရေစီအကျပ်အတည်း, ကိုယ်ကျင့်တရားအကျပ်အတည်း။
သမိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်အတည်း - မကျေနပ်သောလုပ်သားများအကြားစည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ တန်းတူညီမျှမှု၊ ရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးစည်းခြင်း၊ တရားမျှတသောလူမှုရေးစနစ်၏အိပ်မက်များဖြစ်သည့်အတန်းရုန်းကန်မှု၊ အာဏာရှင်စနစ်များ၊ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများ၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ အာဏာရှင်စနစ်ကိုထောက်ခံခြင်း၊ လူမှုရေးနှင့်လူမျိုးရေးဒါဝင်ဝါဒ၏အတုအယောင်သိပ္ပံနည်းကျစွပ်စွဲချက်များ၊ လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များအတွင်းကိုလိုနီစစ်ပွဲများ၊ ဉာဏ်အလင်းပွင့်၏စိတ်ပျက်စရာများ၊ ပထမကမ္ဘာစစ်နှင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်များ၊
ခေတ်သစ်မကောင်းသောအင်အားကြီးလွှတ်။ သေမင်း၏ယဉ်ကျေးမှု၏အဓိက။ ဒုက္ခဆင်းရဲ - အထီးကျန်။ ဉာဏ်အလင်းပြင်ထားသောပြင်သစ်လူမျိုး၏အတွေးအခေါ် - လူမျိုးသည်မူလကလူများကိုစည်းလုံးစေခဲ့သည်။ တူညီတဲ့ဘာသာစကား, တူညီတဲ့ဇာတ်လမ်းရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ အရာအားလုံးသည်ကွဲပြားခြင်းနှင့်ကင်းကွာစေသောအယူဝါဒများ၊ အမျိုးသားရေးဝါဒများ၊
ကျွန်ုပ်တို့ကြေငြာသည်မှာ - သိပ္ပံနည်းကျအကျပ်အတည်းနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခြင်း၊ လူသား၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့်အပင်များကို စုပေါင်း၍ လေးစားမှု၊ ရေ၊ လေနှင့်မြေဆီလွှာများထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းသဘာဝလူသားဖန်တီးမှု၏လူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်၏ကျန်းမာရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မူတည်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကြေငြာခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ရဲရင့်ခြင်း၊ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်း၊ ဒါဟာတစ်ကမ္ဘာလုံး transcendent ဇာတ်ကောင်များ၏ကိုယ်ကျင့်တရားပြုမူသောအမှုဖန်တီးရန်အခြေခံကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအသွင်အပြင်သတ္တဝါများ, အလားတူ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ရုပ်ဝတ္ထုကမ္ဘာ၏အခက်အခဲများန်းကျင်ဖြစ်နိုင်သောတိုက်ဆိုင်မှုကိုရှာဖွေဝိညာဉ်ရေးရာကြီးမြတ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေများအကြားအတူတကွ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမိန့်။
ကမ္ဘာချီလှုပ်ရှားမှုသည်နားလည်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်ချစ်ခြင်းပေါင်းကူးတံတားများကိုဖန်တီးရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဂြိုဟ်အသိုင်းအဝိုင်း၌အိပ်မက်မက်ရမည်
နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ် - သဘာဝတရားနှင့်စိတ်ဓာတ်ရှိသိပ္ပံပညာရှင်များမှအစိုးရများအားအကြံဥာဏ်ပေးရမည်။ သို့မှသာကျင့် ၀ တ်ဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များကိုငြင်းခုံမှုသည်သူတို့၏တိုင်းပြည်များ၊ နယ်မြေများ၊ ဒေသများရှိနိုင်ငံရေး၏အခြေခံဖြစ်သည်။ မနုropဗေဒပညာရှင်များနှင့်ဇီဝဗေဒပညာရှင်များကလည်းအကြံပြုချက်များအရမတူကွဲပြားမှုများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအားလုံး၏လူများ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ ၀ င်မှု၊
ချက်ချင်းဖြေရှင်းချက်များ - လူမှုအလွှာအားလုံး၏လူသားများအကြားဆက်နွယ်မှုအားလုံးကိုစိတ်အေးချမ်းအောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ တိုက်ကြီးနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူမှုရေးတရားမျှတမှုရရှိရန်။ ငြိမ်းချမ်းစွာဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်း၊ အကြမ်းမဖက်သောအတွေးအခေါ်ရုန်းကန်ခြင်း၊ လက်နက်ပြိုင်ပွဲအားတားမြစ်ခြင်းတို့တွင်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြissuesနာအားလုံးကိုကိုင်တွယ်ပါ။
Postmodern အဆိုပြုချက် - ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးများ၊ အတွေးအခေါ်များနှင့်ဘာသာတရားများ၏သတ္တဝါများအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲနားလည်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကင်းကွာစေသောနိုင်ငံရေး - လူမှုရေးစနစ်များအားနိုင်ငံသားအားလုံးလိုက်နာခြင်းကိုတားမြစ်သည်။ အကြမ်းဖက်မှုအပေါ်အချိန်မီစုပေါင်းတိုင်ကြားချက်အတွက်အတူတကွအုပ်စုဖွဲ့။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကွန်ယက်ကိုတည်ထောင်ရန် - ကောင်းမြတ်ခြင်း၏သီလကိုကြဲပါ။
World March - အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကိုမည်သူမျှမလွတ်မြောက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစနစ်များအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှုပေါ် မူတည်၍ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း (သို့) ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူသားဘိုလီးဗီးယားနှင့်အစ်ကိုနိုင်ငံများတွင်ထိပ်တိုက်တွေ့မှုများပိုမိုပြင်းထန်လာသည့်အခါရာစုနှစ်သစ်အစတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုအဖွဲ့ကစီစဉ်သောကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးမတ်လ၏အခြေခံအရေးပါမှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့ချီတက်ပွဲကိုတစ်ဆင့်ချင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အာဒိုဂန်အာ Mendoza ရှိ Punta de Vacas သို့ရောက်ရှိသည်အထိအတူတကွစုဝေးနေထိုင်သော Aconcagua ၏ခြေထောက်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ညီညွတ်သောသတင်းများကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ အမြဲတမ်းလူသားပရောဖက်ဖြစ်သောစီလိုနှင့်အတူလိုက်ပါသွားသည်။
Jallalla! (Aymara) -Kausáchun! (Qhëshwa) -Viva! (စပိန်ဘာသာ)
Khúyay! -Kusíkuy! ရွှင်လန်းမှု! -Rojoice! -Munakuy! အချစ်! တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ချစ်ပါ။
categories စာနယ်ဇင်းမှတ်စု, Uncategorized လက်မှတ်အညွှန်း
1 comment on «Gastón Cornejo Bascopéအားဂုဏ်ပြုခြင်း»
08:10 မှာ 2020/18/22
၎င်းသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပြည့်ဝသောသမာဓိရှိသူ Dr. Cornejo ဖြစ်သည်